Zoma Janoary 26, 2007 Alahady, Aogositra 23, 2009 Douglas Karr
Raha mamaky an'ity amin'ny feed ianao, kitiho Eto hijanona eo amin'ilay tranonkala ary hijery ity horonantsary ity. Mahafinaritra izany.
Hita tao amin'ny The After Mac, horonan-tsary nataon'i Marina.
27 Jan 2007 amin'ny 1:28 PM
Ity video ity dia mandeha tsara amin'ny Google Reader. 🙂
1 Feb 2007 tamin'ny 10:26 maraina
Tena milay tokoa raha manohana haino aman-jery maro i Google Reader!
1 Feb 2007 tamin'ny 9:06 maraina
Hey! Misaotra anao mitsidika The After Mac. Lahatsary mahafinaritra nataon'i Christine huh?!? 🙂
1 Feb 2007 tamin'ny 10:27 maraina
Nahita zavatra tsara izany! Christine no vehivavy voalohany hitako fa faly be toa ahy rehefa mijery ny fitaovana Apple! 🙂